Umbane oMncinci oMncinci: "iivini" ngaphandle kunye nekamva ngaphakathi | Iindaba zeGajethi
Umbane oMncinci oMncinci: "iivini" ngaphandle kunye nekamva ngaphakathi
Namhlanje umsitho uvule iingcango INew York International Auto Show ka-2018. Apho, inkitha yeefemu zihlanganisene ukubonisa inkqubela phambili yazo kwiinyanga ezizayo kwaye zazise ukuba basebenza phi. UMini, kwiqela le-BMW, ​​uye wabothusa abaphulaphuli ngokubonisa UMbane oMncinci oMncinci.
Esi sithuthi, njengoko ubona kwimifanekiso esiyincamathisela kwinqaku, yiMini yakudala evela kumashumi aliqela eminyaka eyadlulayo, inebuchwephesha bexesha elizayo. Ngamanye amagama, uMini ebefuna ukuba-kwakhona kwakhona-uphawu ngaphakathi kwiqela laseJamani, ngubani oza kuphawula indlela eya phambili kungekudala. Kwaye linokuba ngenye indlela, elokuba ikamva linombane ngokupheleleyo.
El UMbane oMncinci oMncinci kungumbono kuphela ukuba, njengoko unokucinga kakuhle, awuyi kuthengiswa. Nangona kunjalo, ngale ntetho ishiye abaphulaphuli bengathethi, ushiya umyalezo ocacileyo kubathengi bakhe ekudala bekho: oomatshini banokwahluka kwaye kufuneka baziqhelanise namaxesha, kodwa uyilo kunye nobuntu babo abusoze bulahleka.
Ayisiyonto intsha ukuba iMini isebenza kwimodeli yombane. Ngapha koko, i-brand ngokwayo iyakuqinisekisa ukukhutshwa kwayo: le moto isekwe kwiminyango emithathu iMini. Yintoni egqithisile, kucwangciselwe ukubona ukukhanya ngo-2019, kanye xa isikhumbuzo seminyaka engama-60 sokumiliselwa kweyunithi yokuqala yemodeli yodumo.
Eminye imifanekiso yabonwa kunyaka ophelileyo. Kwaye kuyaziwa ukuba ezinye izinto ziya kulahleka kule Mini yombane njengezinto ezikhutshwayo okanye iindawo zomoya. Kwakhona, ngokulandela amarhe okuqala, ukuzimela kweqela le-BMW imoto kulindeleke ukuba ibe Ukuzimela malunga ne-350 kms ngentlawulo enye. Ukongeza, impendulo yeemoto ayizukubi: i-0 ukuya kwi-100 iya kuzenza ngaphantsi kwemizuzwana esi-8 kunye Esona santya siphezulu asiyi kuba ngaphezulu kwe-150-160 km / h.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Umbane oMncinci oMncinci: "iivini" ngaphandle kunye nekamva ngaphakathi
I-GoPro Hero, inkampani iveza eyona nyathelo ifikelelekayo yekhamera yesenzo
Esi sigcawu ngumboniso osinceda ukuba siqonde ukuba singakanani na ukuya kwilizwe leerobhothi